Imveliso yedijithali yokuvelisa: uyintoni umphumo wokugqibela? | Martech Zone
NgoLwesithathu, Septemba 30, 2015 NgoLwesithathu, Septemba 30, 2015 Douglas Karr
Uyichaza njani ifayile imveliso ekupheleni kwimveliso yakho yomxholo? Ndisokoliswa kukubona kwabathengisi ngemveliso yedijithali. Nazi ezinye izinto endiqhubeka nokuziva:
Sifuna ukuvelisa ubuncinci iposti enye ngosuku.
Sifuna ukunyusa umthamo wonyaka wokukhangela nge-15%.
Sifuna ukwandisa izikhokelo zenyanga nge-20%.
Sifuna ukuphinda kabini oku kulandelayo kwi-Intanethi kulo nyaka.
Ezi mpendulo ziyacaphukisa kuba i-metric nganye yi uhambisa metric. Imetrikhi nganye engentla inevolumu, ubude bexesha elinxulunyaniswa nayo, kunye nokuxhomekeka okungalawulekiyo kwizinto eziguquguqukayo ngaphandle kolawulo lomthengisi.
Iiposti zebhlog zemihla ngemihla zilingana nemveliso yokugqibela, yiyo imveliso. Ukunyusa umthamo wokukhangela kuxhomekeke kukhuphiswano kunye nokusetyenziswa kweinjini yokukhangela kunye neealgorithms. Ukwanda kwesikhokelo kuxhomekeke kulungelelwaniso lwenguquko, ukubonelela, ukhuphiswano kunye nezinye izinto - ikakhulu ithemba. Kwaye abaphulaphuli bakho kwimidiya yoluntu babonisa igunya kunye nokukwazi kwakho ukukhuthaza umxholo, kodwa kwakhona-ubukhulu becala luxhomekeke kwezinye izinto eziguquguqukayo.
Anditsho ukuba enye yezi metric ayibalulekanga. Sibajonga bonke. Kodwa into endizakuyithetha kukuba ndiyakholelwa ukuba abathengisi bomxholo balahlekile BIG, HUGE, GIANT, OBVIOUS end product… kwaye oko kuphuhlisa ithala leencwadi eligcwalisiweyo lomxholo.
Ngaba izithuba ezihlanu zeblogi ngeveki ziya kusebenza? Oko akuxhomekekanga kubuninzi; Kuxhomekeke kwisikhewu somxholo osowupapashile kunye nomxholo ofunwa ngabaphulaphuli bakho.
Uthini uMhlaba wakho wokuHlaba?
Ekujongeni abaphulaphuli bakho ekujolise kubo, zithini izihloko-ezithile kushishino lwakho- onokuthi wakhe igunya kwaye ubhale umxholo oza kubanceda baphumelele kwikhondo labo nakwishishini labo? Indawo yakho kunye neqhinga lokuthengisa umxholo awupheleli ekubhaleni malunga neemveliso kunye neenkonzo zakho… bobona buncinci obungenanto. Ukuba sisixhobo esinexabiso kubafundi bakho kunye nokwakha ukuthembana kunye negunya lokubanceda baphumelele
Ngaba ulugqibile uphicotho lwendawo yakho yokuchonga iimeko ezininzi zomxholo onokuwunciphisa kunye nokwenza ngcono, kwaye uchonge izikhewu kumxholo ongabhalanga malunga nesidingo?
Ngaba umilisele indlela yokulinganisa ifuthe lomxholo kuguquko ukuze ubeke phambili ekuphuculeni umxholo wakho wangoku kunye nophando kwaye uphuhlise umxholo oshiyekileyo?
Andiqinisekanga ukuba ungayilinganisela njani impumelelo yesicwangciso sentengiso somxholo ngaphandle kokuhlalutya umhlaba onqwenela ukuwunika igunya. Akunakunceda ukuqonda inani lezithuba ngeveki ukubhala ngaphandle kokuba uyayiqonda ukuba zingaphi izithuba ofuna ukuzenza. Mhlawumbi kuya kufuneka ubhale kathathu kwizithuba zeveki nganye ukuyalela ukukhula okufunayo kwishishini lakho.
Ucwangcisa njani ngaphandle kokuchaza imveliso?
Isifaniso sinokuphuhlisa umgca wokudibanisa ukuvelisa amatayara imini yonke kwaye silindele ukugqiba ukwakha imoto. Eminye yemibuzo engentla ingokuphumelela ugqatso ... kodwa awunazo nendawo ezaneleyo zokufumana i-injini ebalekayo!
Nceda ungacingi ukuba ndizama ukwenza lula oku. Yinkqubo entsonkothileyo ethatha itoni yophando ukufumanisa uqoqosho, ubuchule kunye neendlela eziphambili zokubeka phambili ukuze imveliso encinci esebenzayo. Ayenzeki, kodwa kunzima. Nangona kunjalo, nje ukuba uqonde ubungakanani bemveliso yokugqibela, ungaqala ukuthatha inyathelo elibanzi ngakumbi kwaye uphuhlise ulindelo lweziphumo.
tags: umxholo womxholoUkubekwa phambili komxholoimveliso umxholoimveliso yedijithali
Iifowuni zokuSebenza-Ngaphezulu kwamaqhosha nje kwiphepha lakho leWebhu